Iindaba Ezingxamisekileyo Ngezokuhamba | eTurboNews
Ikhaya » Safety
Iindaba ezaphulayo, ulwazi kunye nokwazisa ngemicimbi ebandakanya ukhuseleko kunye nokuhamba. Ukusebenza nenkqubo yokuphendula ngokukhawuleza ye-SaferTourism, uhlaziyo lubandakanya iingxelo ezisemthethweni, iingcebiso kunye nezilumkiso.
Uhlaziyo olungxamisekileyo, imisebenzi yohlangulo kunye nemisebenzi karhulumente.
Cofa apha ukuhambisa iingcebiso zeendaba.
Cofa apha Ukufumanisa malunga nendlela yokuphendula, ukuthintela kunye nokuqinisekisa ukhuseleko lokuhamba.
1 2 3 ... 67 Okulandelayo